Puntland iyo Somaliland miyey kuwada hadlayaan dalka Kenya? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Puntland iyo Somaliland miyey kuwada hadlayaan dalka Kenya?
Puntland iyo Somaliland miyey kuwada hadlayaan dalka Kenya?
April 8, 2018 - By: HORSEED STAFF
Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Cali Gaas ayaa safar aan la shaacin ku tegey maalintii shalay masgaalada Nayroobi ee dalka Kenya, ma jirto war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland oo ku saabsan safarka Madaxweynaha iyo waxa uu daaran yahay.
Warar lagu kalsoonaan karo oo Horseed heshay ayaa sheegaya in Nairobi uu ku sugan yahay ergayga Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Mr M. Keating, waxaaan ay ku ballan san yihiin Madaxweynaha Puntland in ay kulamo ku yeeshaan magaalada Nayroobi. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya kulankaani ku saabsan yahay sidii loo baajin lahaa dagaal culus oo ka dhex qarxa Somali-land iyo Punt-land oo labada dhinacba ciidamo aad u fara badan ay isugu geeyeen deeganka tuulada Tukaraq ee gobolka Sool.
Horseed Media ma xaqiijin ergada ka joogta Somaliland magaalada Nayroobi, iyo in kulankaani gaar ku yahay Puntland oo keliya.
Wararku waxay sheegayaan in Somaliland ay dhici karto in ay dib uga baxdo dhulkii ciidankeedu soo gaareen 8 Janaayo 2018, taas oo ay dhici karto in ay noqoto fursadda keliya ee baajin karta dagaalka.
Muddada uu Madaxweynaha Puntland ku sugan yahay Kenya waxa uu kulamo la qaadan doonaa qaar kamid ah safiirada beesha caalmka ee daneeya arrimaha Soomaaliya iyo kuwa dhanka horumarka ka taageera Puntland.